आजको मौसम : हावाहुरी र मेघ गर्जन सहित वर्षा, कुन–कुन क्षेत्रमा ? – PanchKhal Online
Home/समाचार/आजको मौसम : हावाहुरी र मेघ गर्जन सहित वर्षा, कुन–कुन क्षेत्रमा ?
काठमाडौँ – देशभरको मौसम आइतबार आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पूर्व नेपालमा बिहानैदेखि पूर्ण बदलीको अवस्था रहेको मौसम विद समिर श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्तै मध्य र पश्चिमका पहाडी क्षेत्रको मौसम पनि बदली भएको छ । पश्चिम तराईमा भने मौसम सफा रहेको जनाइएको छ ।
तर दिउँसोपछि बदली हुने सम्भावना छ । पूर्वी नेपालको तराई तथा चुरे क्षेत्रमा पानी पर्ने खालको बादल रहेकाले वर्षा हुने सम्भावना छ । यस्तै अपराहन्नपछि मध्य र पश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा पनि मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद श्रेष्ठले बताए । हावाहुरी चल्ने सम्भावना पनि रहेको विभागले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यका सहितका क्षेत्रमा पनि आंशिक बदलीको अवस्था रहेको छ ।
शनिबार साँझ काठमाडौँ उपत्यका सहितका क्षेत्रमा केहीबेर ठूलो पानी परेको थियो । त्यस्तै बेलुकीदेखि रातिको समयमा देशका अधिकांश स्थानहरूमा आंशिकदेखि सामान्य वदली रहने र मध्य तथा पुर्वी भु-भागका केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन हावा हुरी सहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।